Sarin'ny mpanjifa finday | Martech Zone
Manova ny zava-drehetra ny teknolojia finday. Afaka miantsena, mahazo tari-dalana, mizaha tranonkala, mifandray amin'ny namana amin'ny alàlan'ny endrika haino aman-jery isan-karazany ny mpanjifa, ary manoratra ny fiainany amin'ny fitaovana tokana kely ampy hidirana ao am-paosiny. Amin'ny taona 2018 dia tombanana ho 8.2 miliara fitaovana finday miasa no ampiasaina. Tamin'io taona io ihany, varotra finday dia antenaina hahatratra $ 600 miliara amin'ny varotra isan-taona. Mazava fa ny tontolon'ny asa dia havaozin'ity onjam-teknolojia farany ity; ary ireo orinasa tsy mandray ny tsenan'ny finday vaovao dia ho tavela tsy ho ela.
Isan-taona rehefa mifandray akaiky kokoa sy miantehitra amin'ny finday avo lenta, takelaka ary solosaina findainy ny mpanjifa, dia mihinana sakafo teknolojia finday lehibe kokoa izao tontolo izao. Ity fironana haingam-pandeha ity dia manome fotoana lehibe ho an'ireo mpivarotra, mpikaroka momba ny tsena ary orinasa. Isaky ny mpanjifa mifandray amin'ny tamba-jotra manerantany ary mifandray tsy tapaka amin'ny efijery findainy, ny orinasa izao dia afaka manatona ny mpanjifany amin'ny sehatra manokana sy amin'ny fomba misimisy kokoa.
Na izany aza, mila mahatakatra lalina ny ny fomba fifandraisan'ny olona amin'ny haino aman-jery maoderina. Mila fikarohana ny fahazoana an'io fahatakarana tena lehibe io. Ka hampitomboana ny fahaizanao mamaky teny sy finday ary hizaha ny zava-misy momba ny teknolojia mitarika ny tontolon'ny orinasa ankehitriny, Vouchercloud nanangona ireo lohateny sy tarehimarika momba ny famolavolana ny mpanjifa finday. Mety hanova ny fomba fanaovanao orinasa fotsiny izany.
Tags: fifanarahana eo an-toeranaM-varotramcommercefidirana findayFivarotana finday sy tabletteMobile Appsmobile audioangona findayfifanakalozana findaympanjifa findaytapakila findaydata findayfizarana rakitra findayfahatokisana findaym2m findaysehatra findayLahatsary findaypoketra findaytranonkala findayantsinjaranyvouchercloud
Votoatiny: lakilen'ny famoahana bilaogy mpamono olona
Inona no atao hoe fahazoan-dàlana ambadika?